मुसहर समुदायसँग धुर्मुस सुन्तलीले यसरी मनाए होली (भिडियोसहित) | Rajmarga
मुसहर समुदायसँग धुर्मुस सुन्तलीले यसरी मनाए होली (भिडियोसहित)
काठमाडौ । रौतहटका मुसहर समुदायका परिवार संग हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल “धुर्मुस ” र कुन्जना घिमिरे “सुन्तली” होली पर्व मनाउनुभएको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिका ८ स्थित एकिकृत नुमना बस्ति सन्तपुरमा रहेका मुसहर समुदायसंग उहाहरुले शुक्रबार होली पर्व मनाउनुभएको हो ।
एक अपसमा अविर र रङ दलेर खुसी साटसाट गरि पर्व मनाउनुभएको छ । मुसहर समुदायमा यसअघिको होली पर्वमा रौनक नहुने गरेको बताउदै यस पटक रमाईलो संग होली मनाईएको एकिकृत नुमना बस्तिका अगुवा सत्यनारायण माझीले बताउनुभयो ।
नमुना बस्तिमा रहेका बालबालिका, युवायुवी र बृद्धबृद्धा संग नाचगान र एक आपसमा रङ दलेर कलाकार “धुर्मुस ” र “सुन्तली”ले होली पर्व मनाउनुभएको हो । पहिलो पटक सन्तपुर नमुना बस्तिमा होली पर्व मनाउन पाउँदा हर्षित भएको कलाकार तथा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष कुन्जना घिमिरेले बताउनुभयो । मुसहर समुदायका बसिन्दामा पनि होलीको रंग जस्तै रंगिन जिन्दगीको कामना सुन्तलीले गर्नुभयो ।
होली पर्वले मित्रता, आत्मियता, सामिप्य र सद्भाव दर्शाउने पर्वको रुपमा लिईन्छ । करिब ३ सय जनसंख्या रहेको मुसहर बस्तीका लागि धुर्मुस र सुन्तलीले ४७ घर निर्माण गरेका हुन् । महोतरीको बर्दिवासमा रहेको नमुना बस्तिमा होली मनाएपछि दुवै जना रौतहट आउनुभएको हो ।
Previous post: गृहमन्त्री बादललाई रवीको सिधाकुराः ‘घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद अब मुलुकमा चल्दैन ! साँच्चै हो गृहमन्त्री ज्यु ?
Next post: पद र पावर कस्ले छोड्ला ? फोरम दुई बुँदे सहमतिसहित सरकारमा जाने निश्चित